Ebe nchekwa FAQ - BikeHike
Ajụjụ: Gịnị kpatara okirikiri m bụ ụbọchị 32
Kedu ihe na-ebute ogologo oge ịhụ nsọ? Ihe na-akpata ogologo oge okirikiri bụ enweghị ovulation mgbe niile. N'oge okirikiri nkịtị, ọ bụ ọdịda nke progesterone na-ebute ọbara ọgbụgba. Ọ bụrụ
Ajụjụ: Gịnị kpatara na igwe washer anaghị agbanwe okirikiri
Ihe kpatara na onye na-asa ákwà na-agaghị akwaga na okirikiri ọzọ dabere n'ụdị washer ị nwere: Igwe na-asa ákwà nke na-agaghị emecha okirikiri ahụ nwekwara ike inwe
Ajụjụ: Gịnị kpatara okirikiri Hydrologic ji dị mkpa
Usoro hydrologic dị mkpa n'ihi na ọ bụ otú mmiri si erute osisi, anụmanụ na anyị! E wezụga inye ndị mmadụ, anụmanụ na osisi mmiri, ọ na-akpalikwa ihe ndị dị ka nri, ọrịa nje
Azịza ngwa ngwa: Ihe kpatara eji akpọ Tca Cycle Tricarboxylic Acid Cycle
A na-akpọkwa okirikiri Krebs dị ka okirikiri citric acid ma ọ bụ TCA (tricarboxylic acid) n'ihi na citric acid nwere otu 3- COOH ma bụrụ ngwaahịa mbụ nke.
Azịza ọsọ ọsọ: Ịgba ígwè kwa ụbọchị ọ ga-enyere m aka ịkwụsị ibu
Ijikwa ibu arọ Ịgba ígwè, karịsịa n'ịdị ike dị elu, na-enyere aka belata ogo abụba anụ ahụ, nke na-akwalite njikwa ibu dị mma. Na mgbakwunye, ị ga-eme ka metabolism gị dịkwuo elu ma wuo ahụ ike, nke na-enye gị ohere
1 2 ... 26,103 Osote